SomaliaReport: Malayshiyada Degaanka Weerartay Al-Shabaab
By UGAAS DEEQ ABDI 02/04/2012
Sacadii lasoo dhaafay, al-Shabaab ayaa la dagaalamaysay malayshiyaad degaanka Buurhakabo oo 25km ujirta Baydhabo ee gobolka Bay, halkaas oo al-Shabaab labo nin ku dishay shan kalana ku qabsatay iyadoo udagaalamaysa inay dalka gacanta kusii hayso.
Sheekh Cabdicasiis Mukhtaar oo ah Sarkaal al-Shabaab ah oo Somalia Report lahadlay aya yiri, “Waxaan gacanta ku dhignay shan kooxda malayshiyada ka tirsan labo kalana waan dilay intoodii kalena way carareen, waana ku raadjoognaa si aan gacanta ugu dhigno. Si xaddhaaf ah ayaan u ciqqabi doonaa maadaama ay xasilli daro ka dhaliyeen tuulada. Waxaan daryeelaynaa inaan xasilli daro iyo argagixisnimo loo gaysan dadka hoos yimaada boqortooyada Islaamka.”
Qof degaanka ah ayaa sheegay in al-Shabaab gacanta ku dhigtay shan malayshiyaad ah.
Maxamed Ibraahim ayaa Somalia Report usheegay, “Haa, waxay gacanta ku dhigeen shan nin oo anaga ah, laakiinse waxaan dilay saddex iyaga ah. Hadda al-Shabaab ayaa magaalada ka baaraysa in malayshiyada inteedii kale ku dhuumanayso tuulada.”
Malayshiyada iyagu ismaalgaliyey ayaa waxaa dhawaantaan dhisay dadka degaanka si ay al-Shabaab ula dagaalamaan.
Maxamed Ibraahim ayaa sheegay “Waa koox dhallinyaro ah oo isabaabulay iaygoo kasoo horjeeda habka xukunka al-Shabaab, laakiinse taageero ku filan mahaystaan waayo dadka degaanku waxay ka baqayaan inay al-Shabaab disho haddii ay caawimaan dhallinyarada isabaabushay.”